Oil Distillation System amin'ny tsara indrindra High-Quanlity Products - China NIutech Tontolo_iainana
Oil Distillation System amin'ny tsara indrindra High-Quanlity Products
Oil distillation rafitra
1. Technical dingana fampianarana
Taorian'ny fifanakalozana ampy hafanana ny vokatra avy amin'ny tsipika ny distillation lateral tilikambo, menaka manta miditra ao lafaoro ary tezitra ny mari-pana ilaina. Ny manta solika taorian'ny mafana amin'ny memy no nafindra ho ao an-distillation tilikambo ho distillation, ny fter hihena, tsy combustible entona azo nahazo amin'ny an-tampon'ny tilikambo, lasantsy ampahany amin'ny 1 St rivotra tsipika, ary ny mazava solika ampahany amin'ny 2 daty atmôsfera andalana, solika mavesatra ampahany amin'ny 3 RD tsipika sy ny menaka mavesatra eo amin'ny farany ambany amin'ny tilikambo. Ny savoka afa-po amin'ny manta menaka plastika dia somary avo; ny manta menaka plastika miditra ho raikitra fandriana reactor ho an'ny catalytic de-Mandalina dingana araka ny hafanana fifanakalozana amin'ny alalan'ny lafaoro lehibe, ary avy eo dia nafindra ho any amin'ny tilikambo distillation ny distillation, ary samy lateral andalana ho nahazo vokatra. Non-combustible mandatsa-dranomaso dia nampidirina an-fandrendrehana ho an'ny mandoro toy ny karazana solika. Lasantsy sy ny solika fanafody rehetra azo avy no nafindra ho menaka foana mampifangaro rafitra ho an'ny orinasa mpanadio alkali fanasana sy ny mampifangaro ny hahazo ny lasantsy sy ny solika mahery izay afaka hihaona tsena fitakiana. Ny menaka mavesatra amin'ny ambany ny tilikambo dia nafindra ho solika mavesatra menaka tanky hanome solika ho an'ny lafaoro lehibe sy ny vilany be mpamokatra etona; ny nitsahatra menaka mavesatra dia mitambatra ho araka ny tsena fitakiana ary avy eo namidy toy ny solika menaka.
2. Fitaovana Lalàm-panorenana sy ny Main Fitaovana
Ny solika distillation tarika dia zaraina ho 8 tanteraka ny rafitra toy ny manaraka: rafi-vilany be mpamokatra etona menaka Raw rafitra rehetra menaka lateral rafitra tsipika Non-combustible rafitra entona ny rano hihena rafitra rafitra famatrarana Oil rafitra mampifangaro rafitra Control
3. Features sy ny tombontsoa
1. Dia mety tonga saina ny mitohy dingana, mampifangaro sy ny orinasa mpanadio ny manta menaka, faran'izay betsaka ny dingana afaka ny tanteraka napetraka ny fitaovana, na manamaivana an'ilay famokarana fotoana sy manatsara ny kalitaon'ny Output, Mandra-pahatongan'izany, famokarana fahombiazana sy ny orinasa vola miditra ho nihatsara be. 2. Non-combustible mandatsa-dranomaso dia nampidirina an-fandrendrehana ho an'ny mandoro toy ny solika, izay tsy vitan'ny hoe mampihena ny émission fandotoana ary koa mamonjy hery ary koa mampihena ny fankamamiantsika vidiny. 3. Telo lehibe ny tombontsoa raikitra fandriana reactor: (1). -Pahombiazana hamaha ny olana fa ny fahalotoana votoaty amin'ny menaka manta dia avo izay deactivates nampipoaka haingana. (2). Dia mety tonga saina fitaovana hitondra fiovana goavana fanodinana sy hampihenana ny fandidiana vola lany indrindra. (3). Ny catalytic de-Mandalina vokany tsy afaka manatsara ihany ny vokatry ny tahan'ny ny lasantsy sy ny solika mazava avo-danja koa, tsara ihany koa ny solika manatsara-pahombiazana. 4. Ny feno rafitra napetraka ny distillation dia mandeha ho azy fehezin'ny plc (Programmable lojika fanaraha-maso) ny rafitra, hanatanterahany ny avy hatrany hifehy ny teboka ifantohana ireo ary manana asa maro, toy ny, fanangonana antontan'isa, kajy, firaketana an-tsoratra, atao pirinty tatitra teny, fanairana sy ny sisa.
Industrial mitohy, goavana throughput, hanatsara fitsaboana fahombiazana sy ny famokarana fahaizany. Hafanana ambany manokana pyrolysis teknolojia, ambany fanjifàna, hanatsara vokatra solika sy ny kalitao, azo antoka mandritra ny fotoana maharitra, mitohy ary kijanona miasa ny famokarana, be hanitatra fitaovana * mahatratra. Irery anti-cocking, mafana distribution teknolojia, afaka ny fanazavana mitovy mafana sy? Pyrolized tanteraka, ny tratra kalitao avo vokatra. Mafana fotsiny tombo-kase ny teknolojia, mba ho azo antoka asa azo antoka sy azo antoka. Fanadiovana manokana mandatsa-dranomaso sy ny sisa hafanana fanodinana utilisation teknolojia, nanadio ny entona azo ampiasaina ho toy ny rafitra fanafanana combustible mandatsa-dranomaso, sisa dully hafanana azo ampiasaina, tena nahatsapa ny famatsiana ho an'ny fanehoan-kevitra tsy misy fanampiny pyrolysis fanafanana loharano, hamaivanina mihazakazaka be vidiny. Exhaust entona-pamokarana efa notsapaina, fikirana émission rehetra hihaona amin'ny fitakiana ny Vondrona Eoropeana EEA ny Vondrona Eoropeana sy ny US EPA. Pamokarana iray manontolo hanangana plc fanaraha-maso manan-tsaina, fampitandremana, fanairana sy ny Auto-fanitsiana ny asa, hetsika antoka fiarovana eo ambanin'ny toe-. Low fepetra ho an'ny zavatra hafa, Low miasa mafy sy madio famokarana.
Previous: fako plastika pyrolysis fototra tsara indrindra High-Quanlity Products
Next: Industrial mitohy tamy Tyro Pyrolysis fitaovana
A: Industrial mitohy tamy Tyro Pyrolysis Production-dalana; Industrial mitohy fako plastika Pyrolysis -dalana; Oil Distillation rafitra; Black Carbon koa fitsaboana System
A: Ny solika famaritana mitohy vokarin'ny ny pyrolysis pamokarana dia mifanaraka amin'ny SH / T0356-1996 No 4 Light Fuel Oil. Ny vokatra menaka sarobidy manana hafanana avo sy iva solifara votoaty, azo ampiasaina amin'ny fandoroana, gropy sy ny diloilo hatao distillation manta sns distillation ny solika taorian'ny dingana azo ampiharina ny hery lehibe-ambany haingana solika maotera, injeniera sy ny fambolena fiara / an-dranomasina injeniera ary isan-karazany ny gropy. Fa ny fampiharana ny Carbon Black, dia mifandraisa antsika hahazo bebe kokoa ny antsipiriany
Oil fitaovana fanadiovana
Mitohy Oil Sludge Pyrolysis Fitaovana
Mitohy tamy Tyro Pyrolysis Production-dalana,
Industrial mitohy tamy Tyro Pyrolysis Machine
Industrial mitohy fako Plastic Pyrolysis Machine
solika fanadiovana Plant
solika Sludge Recycling Machine
solika Sludge mikaroka Treatment Equipment
Pyrolysis plastika To Oil
tamy Tyro Pyrolysis Plant
Tyro To solika Plant
Plastic mandany Pyrolysis Production-dalana,
fako plastika Recycling Machine
Plastic mandany mikaroka Treatment Fitaovana
Plastika To mandany solika Fitaovana
fako plastika To solika Plant
Mandany plastika To Oil Fitaovana
Mandany plastika To Oil Plant
Mandany fingotra Pyrolysis Fitaovana
Mandany Tyro Recycling Fitaovana
Mitohy ny teknolojia farany fako Tyro Pyrolys ...